Dibedda Shiinaha soo-saareyaasha looxa loo yaqaan 'acrylic signboard' iyo alaab-qeybiyeyaasha | Zhengcheng
Calaamadaha dukaanka ee Jinhu Convenience Store ayaa sidoo kale qaatay naqshadda muuqaalka sadarka midabka leh ee saddexda midab leh, taas oo fudud oo qurux badan. Sheyga oo dhami wuxuu isticmaalaa xaashida loo yaqaan 'acrylic sheet' ee laga soo dhoofiyo Japan, taas oo aan fududayn in la beddelo oo la libdho. Naqshad si buuxda loo xiray, biyo-la'aan iyo boodh-celin la'aan, waxaan isticmaalnaa tuubo shati leh, dhalaalaya oo tamar badan badbaadinaya.
Magaca badeecada: Saxiixa sanduuqa nalka looxa
Codsiga: Bakhaarka fudud, dukaanka kafeega, dukaan keega, supermarket, dukaanka tafaariiqda farmashiyaha, dukaanka tafaariiqda
Qaab dhismeedka alaabta:
Naqshadaynta qaabdhismeedka dayactirka
Tiknoolajiyada beddelka tuubada iftiinka xariifka ah ee sanduuqa nalka Zhengcheng ee keydinta tamarta uma baahna wax qalab ah ama kala-furidda sanduuqa. Tuubada iftiinka waa la beddeli karaa shan daqiiqo gudahood, taas oo si weyn u yareynaysa dhibaatada dayactirka waxayna yareynaysaa kharashka dayactirka ee calaamadda.
Shirkadeenu waxay leedahay warshad xirfad leh oo leh aag 4,200 mitir murabac ah iyo afar sanduuq oo fudud oo samaysanaya xariiqyo wax soo saar. Zhengcheng wuxuu hadda u adeegaa in ka badan 100 magac oo Aasiya ah wuxuuna soo saaraa in ka badan 30,000 oo mitir oo sanduuqyo iftiin oo tamar-badbaadin ah sanadkiiba ah.
Warshadeenu waxay ku qalabeysan tahay qalab wax soo saar xirfadeed leh, waxayna leeyihiin caaryo wax soo saar badan. Ka dib markay macaamiishu amar bixiyaan, wax badan ayaan soo saari karnaa.
Intaas waxaa sii dheer, shaqaaluhu waxay leeyihiin khibrad hodan ah iyo wax soo saar tayo sare leh. Shirkadeena waxay sameysay xiriir wadashaqeyn saaxiibtinimo muddo-dheer magacyo badan, waxayna ku raaxeysataa sumcad wanaagsan warshadaha sameynta calaamadaha.
Isla mar ahaantaana, waxaan leenahay warshad noo gaar ah, taas oo yareyneysa hawsha ganacsadaha, isla markaana sii yareynaysa kharashka wax soo iibsigaaga.
Dukaamo badan ayaa ka furan geesaha, iyo sanaadiiqda iftiinka dhaqameedku way ka jilicsan yihiin kumana haboona rakibidda. Si kastaba ha noqotee, sanduuqyada fudud ee Zhengcheng waa la kala jajabin karaa markay doonaan, iyagoo leh muuqaal qurux badan iyo astaamo dhalaalaya oo soo jiidanaya macaamiisha.
Hore: Bannaanka dukaanka bannaanka ee Chaoshifa
Xiga: Kaydinta khafiifka ah 'Ministop' khafiifinta khaanadda khaanadda
Saxiixa Farmasiga Acrylic
Calaamadaha Iftiiminaya, Saxeex Farmashiyaha, Calaamadaha Xayeysiinta, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka,